Ogaden News Agency (ONA) – Masuuliyiinta JWXO oo socdaal ku maraya Yurub
Masuuliyiinta JWXO oo socdaal ku maraya Yurub
Posted by ONA Admin	/ May 2, 2011
G/Xigeenka JWXO mudane Maxamed Ismaciil iyo Gu.Hogaanka Arimaha bulshada iyo Abaabulka Mudane Maxamed Abdi Yasiin (Diirane) ayaa baryahanba kormeer hawleed ku marayay Qaaradan Yurub.
Masuuliintan JWXO oo ka qayb-galey Shirkii wada tashiga Hawl-wadeenka JWXO oo lagu qabtey magaalada Frankfurt Germany 22.04 – 24.04.2011 ayaa kormeer hawleed ka bilaabay wadanka Germany, iyagoo ka qayb galay kulan balaadhan oo ay Jaaliyada Somalida Ogadenya ku qabatay 30.04.2011 magaaliada Offenbach ee wadanka Germany.
Waxaa shirka furey Gudoomiyaha Jaaliyada Ogaadeeniya ee Jarrmalka Mudane Maxamed-Qalaafe oo ku hadlayey magaca Jaaliyada S.Ogaadeeniya ee ku dhaqan dalka Germany, isagoo hadalkiisa ku bilaabey xog waran ku saabsan hawl-maalmeedka Jaaliyada, kana ka warbixiyay wax qabadka jaaliyada iyo bulshada ku dhaqan Germany sida ay uga xanuunsanayaan dhibaatada baahsan ee ay xukuumada Itoobiya ku hayso shacabka Ogadenya ee ay gumaysato.
Warbixinta gudoomiyaha Jaaliyada kadib ayaa waxaa Makrofonka lagu soo dhoweeyey GX-ka JWXO Mudane Maxamed Ismail Cumar, GX-ka JWXO wuxuu si fiican uga waramey xaalada Guud ee Ogaadeeniya; xaga Abaalaraha Dabiiciga ah Cunaqabataynta, dilka, kufsiga xanibada hayadaha Gargaarka iyo xuquuqul insaanka iyo cunaqabateenta gumaysigu ku hayo mudada 5 sano ah. mudanae Mohamed waxuu kaloo ka war bixiyay halganka uu shacabka Ogaadeeniya ugu jiro xoreenta ogadenya oo maalin walba meel fiican sii gaadhaya.
GX-ka JWXO Mudane Maxamed Ismaaciil wuxuu aad ugu dheeraadey sida uu Shacabka S. Ogaadeeniya ee Geesiga ah sutida ugu qabtey oo maalinwalba isaga difaaco gardarada Gumeysiga daalimka ah ee Abysiiniya, wuxuu sheegey GX-ka JWXO in Shacabka Ogaadeeniya iyo Jabhadda Waadniga Xoreynta Ogaadeeniya (JWXO) oo is gaashanaya ey ka go´antahey iney iska xoreeyaan Gumeysiga Daalinmka ah ee Itoobiya.
Intaas kadib waxaa Makrofonka lagu soo dhoweeyey Gu.Hogaanka Abaabulaka iyo Arimaha Bulshada (HAAB) ee JWXO Mudane Maxamed Cabdi Yassin (Diirane) Mudane Diirane wuxuu ka warbixiyey halganka Ogaadeeniya ee dibada Khaasatan dadaalka ey
ku jiraan Jaaliyadaha Ogaadeeniya oo garab-taagan Shacabka Dulman ee Ogaadeeniya, Mudane Diirane wuxuu diirada saarey sidey uga go´antahey jaaliyadeheena qaaliga ah
iyo hawl-wadeenka dibada iney halganka Ogaadeeniya u garab istaagaan sida ugu fiican iyaga oo xooga saaraya fashilinta Weerarada Gumeysiga ee dibada loo soo rarey iyo arimaha xuquuqul-insaanka.
Kadibna waxaa la galey munaaqashood iyo taxliinlin xaalada guud ee maanta ka jirta Ogaadeeniya iyo guud ahaanba Damaca foosha xuna ee Gumeysiga Itoobiya iyo Adeegayaashiisa ee dibada loo soo foofiyey, dood iyo wada tashi dheer oo socdey mudo 5-Saacadood ah waxaa la isla gartey qodobadan soo socda:
1-Iney Jaaliyadu ilaaliso midnimada iyo uruurinta Shacabka Ogaadeeniya ee ku nool dalka Jarmalka,iyada oo isha lagu heynayo xafidida Hidaha iyo dhaqanka Suuban ee Ogadeniya
2-Iney Jaaliyadu xooga saarto dhex-galka Bulshada Jarmalka een la nool nahey, iyada oo Shacabka Jarmalka iyo Dawladoodaba la gaadhsiinayo waxa ka jira Ogaadeeniya ee dhabta ah xaga Tacadiyada Gumeysiga Itoobiya, Cunaqabateynta, iyo Abaaraha aad loogu hoobtey.
3-Iney Jaaliyadu ku mintido kaalintii looga bartay ee ahayd ilaalinta danaha xornimo gaadhsiinta Shacabka Ogaadeeniya ee ku jira Gacanta Gumeysiga Itoobiya.
4.Gabagabadii waxaa lagu soo xidhey Shirkii farxad iyo iyadoo lagu balamey in hawlaha halganka ee ka jira wadanka Jarmalka dhexdiisa la sii dardar-galiyo.
Axmed Gaboose/ (ONA), Frankfurt, Germany.
waxan tahniyad udirayaa shirka wada tashiga ah iyo madaxda JWXO sida hufan ee ay udhiran dhirinayaan qadiyadda ogadenya guulna wan u rajeynayaa insha allaah xooga dalka ogadeniyana guul aan dhamaad lahayn ayaan urajeynayaa iyo shacabka dulmanba